Nehemia 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
13 Saa da no, wɔkenkan+ Mose nhoma+ no ɔman no asom; na wohui sɛ wɔakyerɛw wom sɛ ɛnsɛ sɛ Ammonfo+ ne Moabfo+ ba nokware Nyankopɔn asafo mu da biara da,+ 2 efisɛ wɔamfa aduan+ ne nsu+ ammehyia Israel mma, mmom no, wɔkɔbɔɔ Balaam+ paa sɛ ɔnnome wɔn.+ Nanso yɛn Nyankopɔn maa nnome no dan nhyira.+ 3 Enti bere a wɔtee mmara no ara pɛ,+ wofii ase yiyii+ firamanfiramanfo no nyinaa fii Israelfo no mu. 4 Ansa na wɔreyɛ eyi no, na Eliasib,+ ɔsɔfo a ɔhwɛ yɛn Nyankopɔn fie adidibea+ so a ne busuani ne Tobia+ no, 5 asiesie adidibea kɛse+ bi ama no; ɛhɔ na kan no na wɔde aduan afɔre+ ne ɛhyɛ ne anwenne gu; ɛhɔ nso na aduan ne nsa+ foforo ne ngo+ so ntotoso du du a wɔahyɛ sɛ wɔmfa mma Lewifo+ ne nnwontofo ne apon ano ahwɛfo no ne asɔfo no kyɛfa wɔ. 6 Saa bere no nyinaa na minni Yerusalem; Babilon hene Artasasta+ afe a ɛto so aduasa abien+ mu na mekɔɔ ɔhene nkyɛn, na akyiri yi mesrɛɛ kwan de fii ɔhene nkyɛn kakra.+ 7 Ɛnna mebaa Yerusalem behuu adebɔne a Eliasib+ ayɛ ama Tobia,+ sɛ wasiesie asa bi ama no wɔ nokware Nyankopɔn fie+ no adiwo. 8 Ɛyɛɛ m’ani so bɔne yiye,+ enti miyiyii Tobia dan mu nneɛma nyinaa fii adidibea hɔ tow guu+ abɔnten. 9 Miwiei no, meka ma wodwiraa+ adidibea hɔ;+ na mesan de nokware Nyankopɔn fie anwenne+ ne aduan afɔre ne ɛhyɛ+ no guu hɔ bio. 10 Mibehui sɛ na wɔmfa Lewifo no kyɛfa+ mma wɔn ma enti Lewifo ne nnwontofo a wɔreyɛ adwuma no aguanguan kɔ; obiara kɔ n’asase so.+ 11 Ɛnna m’ani beree+ asoafo+ no so, na mibisaa wɔn sɛ: “Dɛn nti na moabu mo ani agu nokware Nyankopɔn fie so?”+ Na meboaboaa wɔn ano de wɔn sisii wɔn gyinabea. 12 Na Yuda nyinaa de nnɔbae+ ne nsa foforo+ ne ngo+ so ntotoso du du+ baa adekora adan+ no mu. 13 Afei mede adekora adan no hyɛɛ ɔsɔfo Selemia ne ɔkyerɛwfo* Sadok ne Pedaia a ofi Lewifo mu no nsa, efisɛ wobuu wɔn anokwafo;+ na Matania+ ba Sakur ba Hanan na na ɔhyɛ wɔn ase; wɔn na na wɔkyekyɛ+ wɔn nuanom kyɛfa ma wɔn. 14 O me Nyankopɔn, kae me+ wɔ eyi ho, na mma wo werɛ mmfi+ adɔe a mayɛ wɔ me Nyankopɔn fie+ yi ho ne ɔhwɛ a mahwɛ so no. 15 Nna no mu no, mihuu nkurɔfo wɔ Yuda sɛ wotiatia nsã-kyi-amoa so homeda+ na wɔde awi a wɔakyekyere soasoa+ mfurum;+ ɛne nsa ne bobe ne borɔdɔma+ ne nnesoa ahorow nyinaa bi, na wɔde ba Yerusalem homeda;+ na mebɔɔ wɔn kɔkɔ wɔ da a wɔde tɔn nneɛma no ho. 16 Ná Tirofo+ bi wɔ kurow no mu a wɔde mpataa ne aguade ahorow nyinaa bi ba bɛtontɔn+ no homeda ma Yudafo wɔ Yerusalem. 17 Enti m’ani beree Yuda mmapɔmma+ no so, na mibisaa wɔn sɛ: “Adebɔne bɛn na moreyɛ de agu homeda no ho fĩ yi? 18 Ɛnyɛ saa kwan yi ara na mo agyanom faa so+ a yɛn Nyankopɔn de mmusu+ yi nyinaa baa yɛne kurow yi so? Nanso hwɛ, moda so ara regu homeda no ho fĩ+ ama abufuhyew no adɔɔso wɔ Israel so.” 19 Na ɛbae sɛ bere a Yerusalem kurow apon no reyɛ aduru sum ma homeda adu no, mehyɛe ntɛm ma wɔtotoo apon no mu.+ Meka kaa ho sɛ wommmuebue gye sɛ homeda no atwam; na mede m’asomfo no bi gyinagyinaa apon no ano na wɔamfa adesoa biara amma mu homeda.+ 20 Ɛno nti aguadifo ne adetɔnfo a wɔtɔn aguade ahorow nyinaa bi no dedaa Yerusalem apon no akyi pɛnkoro ne ne mprenu so. 21 Ɛnna mebɔɔ wɔn kɔkɔ+ sɛ: “Adɛn nti na modeda ɔfasu no akyi? Sɛ moyɛ saa bio a, mɛyɛ mo ade.”+ Efi saa bere no, wɔamma homeda bio. 22 Ɛnna meka kyerɛɛ Lewifo+ no sɛ wonnwira+ wɔn ho daa na wɔmmra mmɛwɛn apon+ no na wɔntew+ homeda no ho. Eyi mu nso, O me Nyankopɔn, kae+ me, na hu me mmɔbɔ sɛnea w’adɔe+ bebrebe no te. 23 Afei nso mihui saa bere no sɛ Yudafo no bi awareware+ Asdodfo+ ne Ammonfo ne Moabfo+ mmea. 24 Wɔn mma no nso, na wɔn mu fã ka Asdodfo kasa, na wɔn mu biara ntumi nka Yudafo kasa;+ mmom aman foforo so kasa na na wɔka. 25 Ɛnna m’ani beree wɔn so, na medomee wɔn+ bobɔɔ mmarima no binom;+ mitutuu wɔn nhwi na mema wɔkaa Onyankopɔn ntam+ na mekae sɛ: “Mommfa mo mmabea mmma wɔn mmabarima, na wɔn mmabea nso munnnye wɔn mmma mo mmabarima, na mo ankasa nso monnware wɔn.+ 26 Ɛnyɛ saa nneɛma yi ara na ɛmaa Israel hene Solomon yɛɛ bɔne?+ Ná ɔhene biara nte sɛ ɔno+ amanaman no mu; ne Nyankopɔn dɔɔ no,+ ma enti Onyankopɔn de no sii Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo, mmea ananafo na wɔma ɔyɛɛ bɔne.+ 27 Ɛnyɛ nwonwa sɛ moreyɛ saa bɔne akɛse yi nyinaa de ato yɛn Nyankopɔn mmara, sɛ moawareware ananafo mmea yi?”+ 28 Ná ɔsɔfo panyin Eliasib+ ba Yoiada+ mma no mu biako yɛ Horonni+ Sanbalat+ asebarima. Enti mepam no.+ 29 O me Nyankopɔn, kae wɔn, sɛ wɔagu asɔfodi ne asɔfodi apam+ ne Lewifo+ no ho fĩ.+ 30 Na midwiraa+ wɔn ho fii ananade biara ho na mede asɔfo ne Lewifo no sisii nnwuma so, obiara ne n’adwuma;+ 31 nnyina+ ne aba a edi kan nso, wɔde bae wɔ bere a wɔahyɛ mu. O me Nyankopɔn, kae me+ ma ensi me yiye.+
^ Hwɛ Ne 8:1 ase hɔ asɛm.